वेटी वचाओ, वेटी पढाओ नारालाई सार्थक बनाउँदै सहयोगी विकास बैंक « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
वेटी वचाओ, वेटी पढाओ नारालाई सार्थक बनाउँदै सहयोगी विकास बैंक
काठमाडौं । सहयोगी विकास बैंकले धनुषा जिल्लाको जनकपुरमा रहेको रामानन्द चोकमा १४ औ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । सो शाखालाई महिलाहरुले व्यवस्थापन र संचालन गर्ने गरी प्रारम्भीक रुपमा संचालनमा ल्या्इएको हो । सो शाखामा हाल कार्यरत कर्मचारीहरु शाखा प्रवधकदेखि मेस्तरसम्म महिलाले नै कार्य गर्दछन । यस शाखामा जम्मा ६ जना महिला आवद्ध छन् । प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको वेटी वचाओ, वेटी पढाओ नारालाई सार्थक बनाउदै उदारणको रुपमा यो शाखा स्थापना गरिएको हो ।
यो शाखा सञ्चालनसँगै प्रदेश नं २ मा महिला शाखा खोल्ने सहयोगी सम्भवत प्रथम विकास बैंक भएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनय रिजालले जानकारी दिए ।
महिलाहरु पनि बैंकिङ्ग श्रेत्रमा अब्वल हुन सक्छन् र राम्रो व्यवस्थापकको रुपमा प्रस्तुत हुन्छन भने भनाईमा थप आयाम यस बैंकले दिएको जनाएको छ । बैंकले यस श्रेत्रका महिलाहरुको पहँुच बैंकिङ्ग क्षेत्रमा बढी भन्दा बढी होस र महिलाहरुको सुविधामा थप सहयोग पुगोस भन्ने दृष्टिकोणले यस बैंकले यस प्रदेश नं. २ मा नयाँ अवधारणालाई प्रस्तुत गरेको छ । बैंकको उक्त १४औं शाखाको अवस्था उत्साहजनक रहेको पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिजालले जानकारी दिए । उक्त शाखामा हाल २५० जनाको खाता सञ्चालनमा ल्याइएको तथा करिब ३ करोड रूपैयाँ निक्षेप जम्मा भइसकेको छ । खाता संख्या र निक्षेप क्रमशः बृद्धि गर्दै लगेको छ । धेरै महिलाहरूले यसै शाखामा बैंकिङ्ग कारोवार गर्न रूचाएको पाएको पनि रिजालले बताए ।
त्यसैबीच नेपाल सरकारद्वारा एक व्यक्ति एक खाताको अवधारणा सार्थक तुल्याउन बैंकले सीता वचत खाता सञ्चालन गरेको छ । उक्त खातामा बैंकले आफ्नो तर्फबाट प्रत्येक खातामा रु. १०० जम्मा गरिदिने व्यवस्था पनि गरेको छ । उक्त खातामा शुन्य मौज्दातमै खाता खोल्न सकिने र मोवाइल बैंकिङ्ग सेवा, एटिएम सुविधा जस्ता बंैकिङ्ग सुविधाहरु उपलब्ध गराएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिजालले बताए ।
हाल यस बैंकको सिन्धुली, महोत्तरी र धनुषा गरी १४ वटा शाखा रहेका छन् भने ४ अर्ब ४० करोड ३७ लाख रहेको छ । त्यस्तै कर्जातर्फ ३ अर्ब ९८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ । यस बैंकको गत आवमा १७ प्रतिशत लाभांश प्रदान गरिएको थियो भने बैंकले यस आवमा २० प्रतिशत लाभांश वाँड्ने योजनाको लगभग तय भएको छ
बैंकको परिसुचाङ्कहरु पनि गत वर्ष भन्दा अझ राम्रो दिने निश्चित रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिजाल बताउछन । बैंकले आफ्नो भवन निर्माण काम श्री शंकरमाली कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरी सुरुवात गरिसकेको छ । नौ महिना भित्र संरचना तयार भई आ. व. २०७६/७७ सम्ममा बैंकले आफ्नै आधुनिक भवनबाट बैंकिङ्ग सुविधा दिने जनाएको छ । यस बैंकको भवन निर्माण लागत करिब ५ करोड रहेको छ । २१ आँै शताब्दी सुहाउँदो बैंकिङ्ग सुविधाको लागि पनि सहयोगी बैंक प्रतिबद्ध रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिजालले बताए ।
बैंकमा हाल कार्यरत कर्मचारी मध्ये महिलाको संख्या १८ रहेको छ । बैंकमा हाल जम्मा कर्मचारी संख्याको ७२ (कार्यालय सहयोगी बाहेक) रहेको छ । यस प्रदेश नं. २ मा रोजगारी, व्यवसाय, तथा महिला जागरणमा बैंकले अहम् भूमिका निभाउदै आएको छ । त्यस्तै महिलाहरुको शिक्षा, व्यवसाय र आर्थिक अवस्थामा बढाउन सहयोग गर्दै जाने सम्बन्धमा बैंक प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिजालले बताए ।